I-Steam: Iklayenti Lomphakathi, Lesitolo kanye Negeyimu ye-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Ngemuva kokuhamba ngezicelo zemidlalo yevidiyo ze-GNU / Linux, njenge I-GameHub, Itch.io y Lutris, kunengqondo ukungayeki ukuphawula ngemininingwane ebuyekeziwe yolwazi olwaziwa kakhulu, olusetshenzisiwe noluphelele ipulatifomu (Umphakathi / Isitolo / Ikhasimende) ukuze imidlalo ku-GNU / Linux, okungukuthi, I-Steam.
Yebo I-Steam kungenxa yabaningi, okungcono kunabo bonke amapulatifomu wokusabalalisa umdlalo wevidiyo yedijithali. Ngaphezu kwakho konke, ngokuba yingxenye yenkampani edume umhlaba wonke, ethuthukisa imidlalo kanye nehardware yemidlalo, ebizwa I-valve.
Ngenxa yalolo sizo, I-Steam namuhla yindawo lapho yabo abasebenzisi (amalungu / amakhasimende) kungaba thenga futhi ulande inani elikhulu lemidlalo, evela kubakhiqizi abahlukile (abathuthukisi be-software), etholakala ku- ikhathalogi enkulu futhi ekhulayo. Ngaphezu kwalokho, ukukwazi ukujabulela ezinye izinsizakalo nezinzuzo.
1.1 Isebenza kanjani iSteam?
1.2 Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani iSteam ku-GNU / Linux?
Isebenza kanjani iSteam?
Qonda futhi usebenzise I-Steam kulula kakhulu. Ngaphandle kokusetshenziswa kwemidlalo yamahhala, evulekile noma evulekile, ebinganikezwa ngaphandle komkhawulo, ngokuyisisekelo, uma uthenga umdlalo kuyo, okuthengayo ukubhaliselwe, okungukuthi, okubhaliselwe okukodwa (okomuntu siqu nokungadluliseki) kufinyeleleka ngokungena ngemvume kwe-akhawunti yakho.
I-Steam ayinikezeli ikhophi ebonakalayo yanoma yimuphi umdlalo. Noma, kuvumela ukudala ikhophi yayo kokunye okusemzimbeni ngemuva kokulandwa. Igeyimu ehlala ihlanganiswe ne-akhawunti yomsebenzisi, ukuze ibavumele ukuthi bayilande, bayifake futhi bayisebenzise kaningi ngendlela ababona inesidingo ngayo, nakumakhompyutha abawadingayo, ngaphandle kwemingcele, ngaphandle kokuyiqala kusuka kukhompyutha eyodwa ngasikhathi, maphakathi ne-akhawunti yakho.
I-Steam iyatholakala nge Iwebhusayithi esemthethweni, lapho phakathi kwezinto eziningi, isivakashi singabhalisela ukuba yingxenye ye- Umphakathi, vakashela i- esitolo ukuthenga kanye / noma ukulanda imidlalo, bese ulanda ifayela le- Iklayenti legeyimu, ngenxa yabo Isistimu yokusebenza efakwe kwikhompyutha yakho.
Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani iSteam ku-GNU / Linux?
Okwamanje, i Iklayenti lomdlalo we-Steam iyatholakala ku- .deb, ku Inguqulo ye-1.0.0.61. Ngaphambi kokuyilayisha nokuyifaka kufayela le- Uhlelo Lokusebenza Oluhambisanayo, esimweni sethu sesibonelo, a I-MX Linux 19.1, ukusatshalaliswa okususelwa ku-DEBIAN 10.3, kungakuhle ukubhalisa endaweni yesikhulumi sewebhu kuqala. Inqubo ilula futhi imi ngokulandelayo:
Qalisa iwebhusayithi esemthethweni yokubhaliswa kwe-akhawunti yomsebenzisi kanye / noma ukungena ngemvume.
Landa bese ufaka kusuka kwiklayenti le-Steam Games.
Ukwethulwa kokuqala kweSteam Game Client ngokuvuselelwa kwakho nokulungiswa kokugcina.
Ukusetshenziswa kweSitolo ngokufaka nokusebenzisa imidlalo etholakalayo.
Njengoba ukwazi ukubona, kokubili ukubhaliswa kufayela le- Ipulatifomu le-Steam, njenge- ukulanda, ukufaka, ukumisa nokusetshenziswa kokunye kwe- imidlalo yamahhala (Ukudlala mahhala) noma okukhokhelwayo (ukuhweba) Akunzima nakancane, futhi ngokuyisisekelo konke kuzoya ngehadiwe lekhompyutha elisetshenzisiwe nokuhambisana kwayo I-GNU / Linux Distro ukuxhasa I-Steam nezidingo zayo, nezidingo zemidlalo ezosetshenziswa.
Phumula, kungaba nge I-Steam, I-GameHub, Itch.io y Lutris, noma ezinye izinhlelo zokusebenza zamagama wevidiyo afana nama-emulator we-retro noma imidlalo yama-desktop ngayinye, kukhonjiswa lokho njengamanje I-GNU / Linux kuyinto enhle Uhlelo Lokusebenza Lamageyimu ngezinga eliseduze kakhulu nalelo le- IWindows ne-MacOS.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Steam» enhle futhi edume ipulatifomu yabadlali bamageyimu konke kukodwa, ngoba kuyi- Umphakathi, iSitolo kanye neKlayenti lemidlalo yama-multiplatform, enekhathalogu enhle kakhulu, enkulu futhi ekhulayo ye «Juegos compatibles» Okwethu Izinhlelo Zokusebenza Ezimahhala Nezivulekile, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Steam: Iklayenti Lomphakathi, Lesitolo kanye Negeyimu ye-GNU / Linux
Uma uthengisa izinhlelo, kufanele uxhase izinhlelo eProton
Ngiyaqonda ukuthi uma uthenga iSoftware ngeSteam ungayifinyelela ngayo, ngakho-ke uma sikuLinux, kungenzeka ukuthi iProton isetshenziselwe ukuyixhasa.
Iza nenketho yokwenza kusebenze iProton
IManjaro Linux 19.0 "Kyria" ifika neLinux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 nokuningi